नेपालमा असामान्य गँड्यौलाको भीडले आउँदै गरेको भूकम्पको संकेत? वैज्ञानिकहरू सोच्दछन् - krishipost.com
नेपालमा असामान्य गँड्यौलाको भीडले आउँदै गरेको भूकम्पको संकेत? वैज्ञानिकहरू सोच्दछन्
नेपालमा भाइरल भएको भिडियो शटमा गँड्यौलाको एक असामान्य झुण्ड रेकर्ड गरियो, ती लाखौंमा थिए र सबैलाई छक्क पार्यो। भिडियो खिच्ने व्यक्ति एकदम छक्क पर्‍यो र भन्छ, “यो छुट्टै प्रकारको गन्ध छ।”
बेलायतका अनुसन्धान वैज्ञानिकहरू रचेल ए ग्रान्ट र हिलारी कोन्लानले प्रकाशित गरेको छ।
यस जर्नलमा यो आउँदै गरेको भूकम्पको संकेत हुन सक्ने बताएका छन् ।
तिनीहरूको रिसर्च पेपर ‘पूर्व-भूकंपीय रसायनिक परिवर्तनहरूको प्रयोगात्मक सिमुलेशनको लागि इन्भर्टेब्रेट्सको (Invertebrates) व्यवहारिक प्रतिक्रिया‘ ‘ मा भूकम्प पूर्व प्रक्रियाहरूले जनावरहरूलाई कसरी असर गर्ने सम्भावित लिंकको विवरण गर्दछ।
नेपालमा रेकर्ड गरिएको जस्तो गँड्यौला झुण्डको व्यवहार भूकम्प जानु अघि बारम्बार रिपोर्ट गरिएको छ; वैज्ञानिकहरूहरु भन्छन्, ” यो इलेक्ट्रिक फिल्ड शिफ्ट वा अन्य अज्ञात मेकानिजमको कारण हुन सक्छ।”
अर्को रिसर्चमा, “Biological Anomalies around the 2009 L’Aquila Earthquake” अप्रिल ६, २००९ मा L’Aquila मा ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो! लगत्तै बत्ती, ग्यास चुहावट, मानव रोग, र अनियमित जनावरहरूको व्यवहार सहितको तथ्य संकलन गरियो! ३०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भयो।
जनवरी २००९ देखि सेप्टेम्बर २००९ सम्म ४० जनाले गँड्यौलाको संख्या बढेको रिपोर्ट गरेका थिए! यी मध्ये धेरैजसो दृश्यहरू केही दिन देखि झन्डै केही घण्टा अघि गरिएको थियो।
भूकम्प – ईटाली
मेनशकभन्दा केही दिन अघि L’Aquila बाट ५ कि.मी. उत्तरमा रहेको गाउँ क्यानसेटेसाको सडकमा एउटा ठूलो संख्यामा गँड्यौलाहरू देखा परे। बासिन्दाले भने कि गँड्यौला आक्रमणको कारण गाउँका केही ठाउँहरूमा हिंड्नु लगभग असम्भव थियो। गँड्यौलाको थुप्रो अप्रिल ५ मा कामारडा गाउँमा तरकारी बगैंचामा देखियो।
मार्च २००९ को अन्त्यमा, मृत गँड्यौलाहरूले L’Aquila बाट २० किलोमिटर उत्तरमा क्यापिटिग्नानोमा एउटा घरको वरिपरि फुटपाथ छोपे र मोन्टेरेले गाउँमा पनि, मेनशकभन्दा पहिले।
भूकम्पको केही दिन अघि L’Aquila बाट २५ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने रोसिओलो गाउँमा पनि ठूलो संख्यामा गँड्यौलाहरू थिए। ग्वाँको कीर्ति पनि चिटीको नजिकै देखियो, लगभग ६० किलोमिटर पूर्व L’Aquila ।
भूकम्प – नेपाल
हालसालै ४.२ परिमाणको भूकम्पले पश्चिम सिक्किम र उत्तर बंगालका केही भागमा धक्का दिएको छ।
अप्रिल २०१५ नेपालको भूकम्प (जसलाई गोरखा भूकम्प पनि भनिन्छ) लगभग ९,००० मानिस मारिए र लगभग २२,००० घाइते भए।